Ambongadiny mahafatifaty ankizy yaorta poketra Mpanamboatra sy mpamatsy |Yingzhicai
zavatra kitapo yaourt
Fampiasana Mety amin'ny ranom-boankazo, ronono, zava-pisotro, yaourt, jelly, janpan, tofu, rano, ronono soja, siramamy, siramamy, sns
2. Ireny famoronana DIY Yaourt Pouch ireto dia fomba tsotra sy mahafinaritra hanaovana ny poketrao feno proteinina izay tena tian'ny kiddos!
3. Ireo kitapo yaourt ireo dia mety tsara ho an'ny datin'ny kilalao, boaty sakafo antoandro, dia an-dalana, andro fianarana, sy ny maro hafa - tonga lafatra ho an'ny reny mandeha mamelona ny zanany kely.
Yogurt Spout Pouch no fonosana sakafo tsara indrindra ho an'ny zazakely sy ny ankizy.Ny fonosana dia tsy lanja maivana sy mety, fa azo antoka ho an'ny ankizy ihany koa.
Ny fizotran'ny asa alohan'ny famokarana:
1. Omeo anay ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny kitapo tianao hatao, toy ny tanjona fampiasana, ny habeny, ny zavakanto, ny rafitra ary ny hateviny, sns. Raha ilaina, dia afaka manome soso-kevitra tsara sy matihanina amin'ny safidinao ihany koa izahay.
2. Hanonona teny arak'izany izahay rehefa avy nahazo ny fampahalalana rehetra momba ny kitapo.
3. Raha vantany vao voamarina ny vidiny, dia hanomboka hiasa amin'ny fanodinana sangan'asa izahay (FYI: mila manamboatra ny sangan'asa ho amin'ny dikan-teny azo atao amin'ny fanontana gravure).
4. Fametrahana ny fenitry ny loko.
5. Hamafiso ny zavakanto ary sonia ny fifanarahana.
6. Ny mpividy dia mila mandoa mialoha ny varingarina (vidin'ny fanontana) sy ny fandoavam-bola 40% mialoha ny baiko.
7. Hanomboka hamokatra vokatra quanlity ho anao izahay aorian'izay.
teo aloha: Kitapo saosy voanjo
Manaraka: kitapo rano
tavoahangy tavoahangy premake ranom-boankazo kitapo
mitsangana tavoahangy endrika paosy
Kitapo saosy voanjo